Ungadangali Ngemidiya Yezokuxhumana | Martech Zone
Omunye wabantu engiphuma endleleni yami ukuzwa ukukhuluma nguJay Baer. Namuhla ekuseni bekufanele ngivuke ngaphambi kwelanga ukuze ngishayele ngiye BlogIndiana ukuzwa inkulumo yakhe eyisihluthulelo - futhi belulifanele uhambo. Kunezizathu ezimbalwa. UJay unesipiliyoni seminyaka engama-20 njengomkhangisi futhi akanqeni ukusho umbono wakhe. UJay naye ungumuntu oqotho - awukho umehluko phakathi kokuthi ubani ombona esiteji nokuthi uhlangana nobani ngokoqobo. Futhi, ngemuva kokubona uJay ekhuluma izikhathi eziyishumi nambili, angikaze ngiyibone iphrezentheshini efanayo kabili.
Bengikhala kuJay ngokuthi bengifuna ukwazi ukuthi amanye amabhulogi abemancane kakhulu kunawami athola kanjani ukuphindaphindwa, ukuthandwa nokushiwo. Ngize ngazibuza, mhlawumbe, uma abanye abantu bedlala le mboni. UJay wayengacabangi ukuthi babekhona - uthola ithoni yama-retweets nokwabelana nomphakathi kubhulogi yakhe, Kholisa futhi uguqule (kumele ufunde!).
Angikholwa ukuthi izinga lokuthunyelwe kube yinkinga - sihlonishwa kakhulu embonini yezokumaketha. Mina noJay saxoxa ngevolumu yethrafikhi engangiyithola futhi, uma kuqhathaniswa, ibhulogi yakhe ithola ukufundwa okufanayo. Kodwa-ke, abafundi bakhe banolaka kakhulu Ukwabelana imininingwane ekhishwa nguJay. Hhayi imali encane - inani elikhulu… ngokwesilinganiso ama-tweets angama-200 okuthunyelwe!
Ekhoneni likaJay kukhona okuqukethwe kwakhe okumangalisayo, ubuchwepheshe bakhe ekuxhumaneni namanethiwekhi akhe, kanye nokuxhumana kwakhe okuqhubekayo. Ubuye abe nokulandela okukhulu kakhulu ku-Twitter naku-Facebook kunathi. Kuzungezile, uJay unemivimbo embalwa ngaphezu kwesikhundla sami. Uma nginguKaputeni, uyi-Admiral. Ngiyamhlonipha kakhulu.
Ngokukhuluma ngalokhu, kwacaca ukuthi abantu abalandela uJay banenhlalo ngokweqile abanegunya elikhulu. Abantu abalandela uJay nabo sebesezingeni eliphezulu! Abalandeli abaningi bakaJay banabalandeli abaningi bebodwa - futhi bayathanda ukwabelana ngamanethiwekhi abo. Lokhu ngumehluko phakathi kwezilaleli zami nezikaJay. Ngingumfana wamantongomane namabhawodi alwa nabakhangisi emseleni. Yize siheha abantu bawo wonke amazinga ezemfundo nobukhulu bemboni… kuyibhulogi emayelana nokumaketha.
UJay une-blog emayelana nokumaketha, kepha ugxile kakhulu futhi wahlanjululwa endaweni yezokuxhumana kunami. Sisike indawo ebanzi… nakho konke kusuka analytics ukuthengisa nge-imeyili. Izithameli engifinyelela kuzo zibandakanyekile, kepha azinawo umgomo wokwabelana noma wokukhuthaza okuqukethwe engikubhalayo. Iningi labafundi bami alisebenzi ngokuphelele emithonjeni yezokuxhumana, ligxile kakhulu ekukhangiseni komkhiqizo nasekukhangiseni.
Nali iphuzu lami. Nganginombono omfushane njengoba ngangikhala ngokusebenza kokuqukethwe kwami. Akufanele ngidumale nakancane - kufanele ngikhuthazwe ukuthi ngikhuluma neqembu labafundi ababambe iqhaza elingakangeni ezinkundleni zokuxhumana njengamanje. Ngiyethemba ukuthi ngingabasiza bafike lapho, kepha kungenzeka kungabi namuhla noma kusasa, kungahle kube yiminyaka kude. Inethiwekhi yakho kungenzeka ifane, ikakhulukazi uma ungekho ezimbonini eziku-inthanethi. Ungadangali njengoba ubhala ithoni yokuqukethwe okuhle kepha kwabiwa kuphela idlanzana labantu. Akuwona wonke umuntu onenhlalo njengathi.
Izinqubomgomo Zomphakathi Zokuxhumana Emsebenzini
Aug 12, 2011 ngo-5: 30 PM
Ngiyabonga. Angifanele noma yini yalokho, kodwa ngiyabonga.
Angikaze ngigijime izinombolo kulokhu ngokuqinisekile, futhi ngiyaqiniseka ukuthi kukhona abathengisayo, kepha ngikholelwa ukuthi kuyiqiniso ngokungananazi. Engikutshela amaklayenti ami abloga ukuthi ukucindezela kokuqukethwe kwakho kunciphile, maningi amathuba okuthi uvuselele izindlela zokwabelana nokuziphatha kokubhalisile, ngoba kungenzeka ukuthi umfundi azizwe sengathi ukhuluma ngqo ngesimo sabo. Ukuhweba kungumgwaqo.
I-Broader = izivakashi eziningi, ukubhaliswa okuncane okwabiwayo +
Nciphile = izivakashi ezimbalwa, ukwabelana okuningi + okubhaliselwe
Damn, manje kufanele ngibhale okuthunyelwe kubhulogi ngalokhu futhi! Siyabonga ngokuncoma DK. Kuhle ukukubona njengenjwayelo!
Aug 12, 2011 ngo-5: 55 PM
Kunengqondo impela, Jay! Ngibheke phambili kokuthunyelwe. Masithathe iMezcal Blanco maduzane.
Aug 15, 2011 ngo-4: 40 PM
I-Twitter ihlala iyindawo yokudlala ye "twitterati" yezengqondo nezenhlalo. Ngilandela abantu abangaphezu kwekhulu esikhaleni sokumaketha / senhlalo / sobuchwepheshe kuphela, futhi kungaba nzima ukwethula lonke ulwazi. Okuqukethwe okuningi okutholwa kabusha ku-intanethi kuvela ku-subset encane kakhulu. Khuluma ngokuhlanganisa, kuthiwani ngakho ukukuqamba kabusha. Into eyodwa engingayitshela uDick Costolo kuTwitter ukuthi “Khiphela i-Twitter laphaya ezixukwini, amanxusa amakhulu angahlanjwanga, nginike abasebenzisi be-Twitter abayizigidi ezingama-400, bese BESE ukhuluma ngemodeli esebenzayo yemali engenayo.” Kepha uma kukhulunywa ngalokho enikwenzayo, iqiniso ukuthi kufanele unikeze ukuqonda okuwusizo, okucabangayo, njalo. Futhi (idramu roll) kufanele, umane uhlanganyele nezethameli, ngokuhlaziya, emicimbini, noma kuphi. Empeleni, ezimweni eziningi imibono engiyifundayo imvamisa inezinto eziningi ezinhle kuzo. Lesi yisiqalekiso nesibusiso sehlelo njengeqiniso lesabelo sethu.